Charles Perrault: biography uye akanakisa evana nyaya | Zvazvino Zvinyorwa
Charles Perrault ndiye munyori uyo atove chikamu chehucheche hwedu, hwenhoroondo, hwenyaya yepasi rose Dzake dzimwe dzenyaya dzine mukurumbira uye dzisingagumi dzevana, kunyange hazvo chokwadi chemunyori wechiFrance ichi chaigara chichitenderera zvakanyanya pahumambo uye "chaicho nyika" pane fungidziro. Hupenyu nebasa raCharles Perrault Haisi chete inonakidza nhoroondo, asiwo kana zvasvika pakunzwisisa mashiripiti akachinja zvachose simba rekutaura nyaya.
1 Charles Perrault: munyori wenhau kuDare
2 Charles Perrault: Yake Yakanakisa Nhau pfupi
2.1 Iyo yakanaka durmiente
2.2 Diki Red Riding Hood
2.3 Ndebvu Bhuruu
2.4 Mboro ine bhutsu
Charles Perrault: munyori wenhau kuDare
Charles Perrault akaberekwa muna Ndira 12, 1628 muParis, muchipfuva chemhuri yema bourgeois baba vavo vaive gweta muParamende, izvo zvaivabvumidza kunakidzwa nehupenyu hwakaropafadzwa. Perrault akazvarwa panguva yekuzvarwa kaviri uyo mapatya, François, akafa mwedzi mitanhatu mushure mekuuya munyika.
Muna 1637 akapinda Koreji yeBeauvais, kwaakaratidza hunyanzvi hukuru nemitauro yakafa. Muna 1643 akatanga kudzidza zvemutemo kuitira kuti utevere tsoka dzababa vake nemunin'ina wake, Pierre, muteresi mukuru uye mudziviriri wake mukuru. Uye ndezvekuti kubva pazera diki kwazvo, Perrault airatidza kugona kukuru kwezvidzidzo, ichi chiri icho chikuru chake chikuru kune zvakawanda zvehupenyu hwake.
Muna 1951 akapedza kudzidza kubva kuBar Association uye makore matatu akazove mukuru muhurongwa hwehurumende. Pakati pezvipo zvake zvekutanga, munyori akatora chikamu mukugadzira iyo Academy yeSainzi uye iyo Academy yeArt. Zvisinei, kunyangwe hazvo aine chinzvimbo mune zvematongerwo enyika uye hukama hwake nehunyanzvi, Perrault haana kumbopokana nehurongwa uye haana kupa zviratidzo zvekufungidzira kuti nyaya dzake dzaizomutsa makore apfuura. Hupenyu hwake hwaive hwakaganhurirwa mukuzadzisa basa rake uye nekukudza Mambo Louis XIV muchimiro chenhetembo nhaurirano, izvo zvakamupa kuyemurwa kwenzvimbo dzakakwirira uye chinzvimbo chemunyori weFrench Academy muna 1663 pasi pemubati wemudziviriri wake mukuru, Colbert, chipangamazano kuna Louis XIV.
Muna 1665, aizove mumwe wevakuru vehumambo. Muna 1671 akagadzwa kuva Chancellor weChikoro uye akaroora Marie Guichon, uyo waakaita naye mwanasikana wekutanga muna 1673. Akave nevamwe vana vatatu, achirasikirwa nemukadzi wake mushure mekuzvarwa kwekupedzisira, muna 1678. Makore maviri gare gare, Perrault aifanira kusiya chinzvimbo chake kumwanakomana waColbert, nguva ingangoratidza kushanduka kwake kuenda kuchikamu chemunyori wevana ane zita guru yaive Ngano kubva zvakapfuura, zviri nani kuzivikanwa seNgano dzaAmai Goose. Zvisinei nekunyora idzi nyaya dzese muna 1683, dzaisazoburitswa muna 1697.
Mumakore ake ekupedzisira ehupenyu, Perrault akazvipira kunyorera odes kuhumambo, mambo weSweden, Spain uye, kunyanya, Louis XIV. Akakumikidza nhetembo kwaari El Century raLouis Mukuru, iyo yakakonzera nyonganiso huru mushure mekuburitswa kwayo muna 1687.
Charles Perrault akashaya musi waMay 16, 1703 muParis.
Charles Perrault: Yake Yakanakisa Nhau pfupi
Kunyangwe chikamu chebasa rake rekunyora (kusanganisira ake makumi mana neshanu akaburitswa mushure mekufa) akataura nezvemadzimambo, Dare nemamiriro ezvematongerwo enyika, Nyaya dzavana Perrault zvaisanganisira hunhu hwaionekwa nemunyori zvichidikanwa munguva dzekushushikana sedzemuzana ramakore rechi XNUMX France.
Ogres, fairies, katsi dzakabvaruka uye machindakadzi akatanga kukweverwa pamusoro wake akafuridzirwa nenyaya dzakatenderedzwa pakati pemakirasi epamusoro senhaka yekutaura kubva kune dzimwe nyika dzeEurope uye nedzimwe dzekunze. Nekudaro, marongero chaiwo aimboshanyirwa nemunyori, senge nhare yeUsse, muDhipatimendi reIndre neLoire, zvaizokurudzira nyaya dzakadai seRara Runako.
Bhuku rakaunganidza chikamu chenyaya idzi rakanzi Histoires ou contes du temps pass, avec des moralités nemusoro wekuti Contes de ma mère l'Oye pabutiro rekuseri. Vhoriyamu yaive nenhau sere, inozivikanwa kwazvo naCharles Perrault:
Iyo yakanaka durmiente
Nyaya yakakurumbira yeMambokadzi Aurora, akatongerwa kurara nekusingaperi mushure mekurumwa neshinda, yave imwe yenyaya dzisingagumi munhoroondo. Perrault yakadhonza iyo kurara muchindakadzi ngano Saka zvinowanzoitika mune zvekare Icelandic kana Spanish nyaya uye akawedzera kumwe kunoshamisa uye kunonzwisisika kubata.
Diki Red Riding Hood
Nyaya yemusikana akapfeka hood tsvuku akamhanyira mumhumhi munzira yekumba kwambuya vake yakabva ngano kubva kuma medieval times kuratidza mutsauko uri pakati peguta nedondo. Perrault akadzvinyirira zvakadzama ruzivo (sekukoka kwemhumhi ku Little Red Riding Hood kunodya zvisaririra zvaambuya vake) uye vanokwanisa hunhu hunotungamirwa kune vese vakadzi vadiki kana zvasvika pakuvatadzisa kusangana nevanhu vavasingazive.
Nhoroondo diki yekunyepedzera yenyaya dzaPerrault dzainongedzera kumukadzi akawana zvitunha zvevaimbova vakadzi vemurume wake munhare yakaipa. Kunyangwe hazvo nhoroondo yeimba inoyevedza uye murume asinganzwisisike anobva mungano dzechiGiriki, zvinofungidzirwa kuti Perrault yakafemerwa nemifananidzo yakadai semhondi. Gilles de Rais, wezana ramakore rechiXNUMX Breton nobleman.
Mboro ine bhutsu
Katsi yemwanakomana wemurimi anosiya nhaka yake yese mushure mekufa inova fungidziro yenyaya inosetsa iyi kududzirwa kwacho kuchiri kukwidza nharo dzinopfuura imwe. Vamwe vanovimba nedzidziso yekuti katsi yemunhu inomhanyisa bhizinesi yaive chidzidzo mukutungamira kwebhizinesi, nepo vamwe vachinongedzera kumhuka iri mumabhuti sedimikira remweya wemunhu iye pachake.
Nyaya shoma dzakapfuura zvakapfuura munguva seiya Cinderella, mukadzi wechidiki aishandira amai vake vokurera uye vanin'ina vaviri vekurera vachishuvira kuroora muchinda. Iyo nyaya yakaratidza yechinyakare pfungwa mupasi: kurwa kwechakanaka nechakaipa, dingindira raive ratovepo mune imwe yekutanga shanduro dzerondedzero kubva kuAkare Egypt.
Thumbelina aive gotwe pavana vasere. Kubatsira kukuru kwakamutendera kuti azvivanze mubhutu reiyo ogre yaida kuvadya vese. Kudimikira uku kukura hakuratidze kukosha kwemunhu.
Dzimwe nyaya mbiri dzakabatanidzwa mubhuku dzaive Iwo mafairies uye Riquet neepompadour, asinganyanyi kuzivikanwa. Nekudaro, mune inotevera vhezheni yeTales yaAmai Goose, yaiverengerwa Ass ganda, imwe zvekare Perrault iyo yakashora makunakuna nekutaura nyaya yamambo vaida kuroora mwanasikana wavo.
Ndeipi nyaya yaunofarira yaCharles Perrault?
Waizviziva here izvi Nhau nomwe dzekuverenga munguva yekufamba kwepasi pevhu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Charles Perrault: biography uye yakanakisa nyaya dzevana
Iwe unoziva iyo yekushambadzira yeEdhasa imba, inoyevedza mukuunganidzwa kwayo kweMABVUNZO emabhuku, chishamiso
Chinyorwa chakanaka, ndakachinakidzwa chaizvo. I think of all, Kurara Runako ndiko kwandinofarira. Tarisa chinyorwa zvakanaka, pane mamwe marudzi (1951 / suss). Ini ndatanga kukutevera, yako blog yakanaka.
Daniela Carmen akadaro
Zvinyorwa zvakanaka kwazvo
Pindura Daniela carmenn
Mhoro, ndine hurombo asi pane zuva rawakakanganisa "Muna 1951 akapedza kudzidza kubva kuBar Association"
Munyori ane hunyanzvi, ipfuma yekugona kunakidzwa nemabasa etitan yakadai, uye kuti meseji yake inoenderana nemamiriro azvino uno chiratidzo chekuti akafarira kuona kwakanaka kwazvo. Uye kunyangwe hazvo chikamu chikuru chenyaya yavo vachirasikirwa nechikamu chemukati mezvinhu zvemafirimu, ivo vachiri vehurema husingaverengeke.
Mhoro, ndingaite sei kutsanangura peji rino ndapota, handisi kuwana iro zuva rakagadzirwa….